ရိုး ရိုး ဘ လော့ဂ် : UK this week
The new government has been selected by UK citizens last Wednesday. The conservative party won the election. The new Prime Minister name is David Cameron. He is 43 years old. AsaPrime Minister, he has to choose his cabinet. The word "CABINET" can meanacupboard however in politics term, cabinets isagroup of advisers which consists of 12 people of the members he chooses. It is reported that he hasn't chosen many women so far whereas Tony Blair had 101 women in his government. Back in (1979 - 1990), Margret Thatcher was the first lady Prime Minister in the British political system. However there were no other women in her cabinet.
ယူကေ မှာ အစိုးရအသစ် တခုကို ရွှေးကောက်ပွဲ မဲ အရေ အတွက်အရ တရားဝင် ဆုံးဖြတ်ဖွဲစီး လိုက်ပါပြီ။ ဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ရဲ့အမည်က တော့ ဒေးဗစ် ကင်မရွန်း အသက် ၄၃ နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။ အခု သူ ရဲ့ အစိုးရ အကြံပေး အဖွဲ ကိုဖွဲ့ စည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားဟာ အင်မတန်မှ ဆန်းပါတယ်။ ဒီအစိုးရ အကြံပေးအဖွဲ (cabinet) ဆိုတဲ့စာလုံးပေါင်း ကို တနည်းအားဖြင့် ဘီဒို (အဝတ်ထည့်တဲ့ ဘီဒို) လို့ လဲ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ အစိုးရ အကြံပေးအဖွဲ ဝင် ၁၂ဦးကို ဒေးဗစ်ကင်မရွန်းက ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ အမျိုးသမီး အရေ အတွက် နည်းနည်းလေး သာ ခန့် ထားလို့ အမျိုးသမီးထုဆီက အသံထွက် နေတာကြားမိပါရဲ့ ။ ယခင့်ယခင် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တိုနီ ဘလဲ တုန်းက သူ့ အစိုးရမှာ အမျိုးသမီး ၁၀၁ဦး တောင် ခန့် ခဲ့ ဘူးပါတယ်။ လွန်ခဲတယ် ၁၉၈၀ ခုနှစ်လောက် က ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မာဂရက်သက်ချာက တော့ ဗြိတိန်သမိုင်းမှာ ပထမဆုံးအမျိုးသမီး ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြီး သူ့ မ ဖွဲ့ တဲ့ အစိုးရမှာ သူ မအပြင် အမျိုးသမီး တစ်ဦးမှ မခန့် ခဲ့ ပါဘူး။
Posted by ရိုးရိုး at Friday, May 14, 2010
Labels: English post, My interest, Politic and news
Videos for your Sunday, Enjoy!
ကမ္မောဒီးယားက တောနက်ထဲမှာ ၁၆နှစ်ကြာ ပျောက်ဆုံးနေ ခဲ...
The Green Mile ကားထဲက သီချင်းလေးပါ။ စိတ်မကောင်း...
ဒီအက ကြည့်လို့ ကောင်းတယ်
Queen's Speech traditions Full of tradition and pa...
ခေါင်းစဉ်မရှိ - ၁
BUILD YOUR SELF CONFIDENT
တရုတ် မွေးကင်းစ ကလေးငယ် နှင့် မိခင် မီးနေသည်
CELEBRITIES & THEIR PRIVATE LIVES
dutiya 's blog မှ ကြိုက်တဲ့ပိုစ့်တခု